कलम कलिउड कलम कलिउड
डेनमार्कका सिनेमाबाट सिक्ने कुरा admin January 29th, 2012
जनवरीको पहिलो साता डेनमार्क गएको थिएँ। त्यहाँका फिल्म उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम थियो। डिसिसीडी (डेनिस सेन्टर फर कल्चर एन्ड डेभलपमेन्ट)को निम्तोमा १४ वटा संस्थाको भ्रमण र प्रशस्त छलफल भयो। हलिउडको अतिक्रमणले युरोपका अरु थुप्रै मुलुकलाई गाँजे पनि डेनमार्कको बलियो उपस्थितिले मलाई चकित तुल्यायो। उनीहरुले २७ प्रतिशत घरेलु दर्शकलाई अड्याउन सकेका रहेछन्। सन् १९९० पछि संस्कृतिमा राज्यले ठूलो लगानी गरेपछि यति राम्रो अवस्था बनेको त्यहाँका फिल्मकर्मीले बताए। बाँकी»
प्रसंगपहिलो प्रतिक्रिया दिनुस् » सबैभन्दा कुन राम्री ? लक्ष्मण January 28th, 2010
गाउँलेदेखि सूर्यचन्द्रसम्म २० वटा फिल्म निर्देशन गरेका निर्देशक दीपक श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो फिल्म गाउँलेमा दीपाश्री निरौलालाई नायिकाको रूपमा ‘ब्रेक’ दिए । गोली सिसाको…को गीतबाट समेत चर्चित भएकी दीपाश्रीलाई मिलनसार र समझदार कलाकारको रूपमा व्याख्या गर्छन्, उनी । ‘म नयाँ थिएँ । जसका कारण राम्ररी खुलेर काम गर्न सकिनँ । तर, कलाकारले भने साथ दिएका हुन् ।’ गाउँलेमा बिपना थापा प्रमुख नायिका थिइन् । उनले पनि कुशल कलाकारको भूमिका निभाएको बताउँदै उनले भने, ‘म नयाँ भएर होला सायद, उनी रिजर्ब बस्थिनन् । मलाई पनि कता-कता असजिलो महसुस हुन्थ्यो । तर, भूमिकाअनुसार भने जमेर काम गरिन् ।’ बाँकी»
जीवनको ऐना2 प्रतिक्रियाहरु » फिल्म पाएपछि हिरोइनको पाटी लक्ष्मण June 7th, 2009
आफ्नो हातमा फिल्म पार्न हिरोइनहरु कतिसम्म हर्कत गर्छन भन्ने कुरा त फिल्मकर्ममा लागेका अधिकांशलाई थाहै छ । तर, आफूले आफ्नो दुश्मन ठान्ने हिरोइनलाई फुत्काएर त्यो फिल्म आफ्नो हात पार्न सफल भएमा भने त्यो हिरोइन कति खुशी होली ? यस्तै भयो गत साता अरुणीमा लम्सालको सन्दर्भमा । उनलाई निर्माता सुशील पोखरेलको नीगरानी फिल्म हात परेपछि त के चाहियो र ? पहिला रेखा थापालाई खेलाउने पक्का भएको निगरानीमा रेखा खेल्न नभ्याएपछि त्यो फिल्म अरुणीमाको हात पर्‍यो । अर्काले छोडेको फिल्म हात पर्दा उनलाई निकै गर्व महसुस भयो । अनि त सुरु भइहाल्यो छिन्छिन्मा निर्माता,निर्देशकलाई फोन गर्ने क्रम । फोनमा चिया पिउनु भयो, खाजा खानु भयो ? खाना खानु भयोदेखि लिएर तरकारीमा नून कति लागेको थियो भन्नेसम्मका ‘आत्मीय’ कुरा सोध्नु हुन लाग्यो । निर्माता सुशील भने अरुणीमाको फोन आएपछि सबै काम छोडेर, यतिसम्मकी चलाइरहेको गाडी साइड लगाएर भएपनि मोबाइल उठाउन ब्यस्त हुन थाले । मोबाइलमा सुशील बोल्छन्,’अँ नानू, के छ तिम्रो हाल खबर ? कहाँ भेट्ने ?’ आदि आदि ।
त्यसैबीच, फिल्म पाएको खुशीयालीमा अरुणीमाले निर्माता,निर्देशक, क्यामेराम्यान तथा अन्य केहीलाई पार्टी दिइन् । हिरोइनको पार्टी खाएर हल्लीदै आएका क्यामेरा म्यान कृष्ण श्रेष्ठले चुरोट सल्काउदै भने,’आज भुँडी फुट्ने गरी अरुणीमाको पार्टी खाइयो । वा अरुणीमा… बाँकी»
चर्तिकला34 प्रतिक्रियाहरु » डेनी द डगबाट चोरेर इन्साफ लक्ष्मण December 21st, 2008
सोभीत बस्नेतले निर्देशन गरेको इन्साफ नामको फिल्म अहिले काठमाण्डौका केही हलमा चलिरहेको छ । उनी इन्साफ फिल्मको कथालाई बवाल, अत्यन्तै नौलो कथा भनेर फलाक्छन् । तर, अपशोच उनको इन्साफ जेट्लीको डेनी द डग नामक अंग्रेजी फिल्मबाट हुबहु उतारिएको छ । हुन त सोभीतले अहिलेसम्म कुन चाहिँ फिल्म गतिलो,मौलीक कथामा बनाएका छन् र ? तर, सँधै हिन्दी फिल्म चोरेर नेपालीकरण गर्ने सोभीतले इन्साफ भने अंग्रेजी फिल्मबाट चोरे । त्यो पनि जेट्लीको र अनि सुपरहिट फिल्मबाट । उनले सोचेका थिए ,नेपाली दर्शकले अंग्रेजी बुझदैनन्, त्यसैले उनीहरुले अंग्रजी फिल्म हेरेकै हुदैनन् । म मात्र बाठो छु, सजिलै बेकुफ बनाउन सक्छु । तर,सोभीतको यो आइडियाले घुडा टेकेको छ । उपत्यका बाहिर फ्लप भएर बल्लतल्ल काठमाण्डौमा लागेको इन्साफको हालत बिजोग छ । बाँकी»
चर्तिकला35 प्रतिक्रियाहरु » निर्देशक नरेश की अरुणिमा !! लक्ष्मण November 19th, 2008
सुटिङ सुरु भएको पहिलो दिनमै ‘बाटो परेर’ नक्सालको अनमोल क्याटरिङमा एकछिन् नरेश पौडेलको निर्देशनमा निर्माण भइरहको ‘दीपशीखा’ को सुटिङ हेर्ने मौका पाइयो । निर्देशक पौडेल क्रेनमाथि राखेको क्यामेराबाट सर्ट लिन क्यामेराम्यानलाई गाइड गरिरहेका थिए । उक्त चलचित्रकी नायिका अरुणीमा लम्साल निर्देशक पौडेलकै वरपर घुम्दै थिइन् । बिहेको यज्ञबाट केटीको बाबुले आफ्नो छोरी घिच्याउदै लग्ने अनि दुलहा लगायत अन्य जन्तीहरुले ट्वा परेर चुपचाप त्यो दृश्य हेरिरहने सट लिइदै थियो । कतिबेला क्रेन डाउन हुन ढिलो हुने त कतिबेला जुनीयर कलाकारहरुको र्याक्सन नपुग्नाल तीन ‘टेक’ सम्म पनि ‘सट ओके’ हुन सकेको थिएन । चौथो टेक निर्देशक पौडेललाई चित्त बुझ्यो, ‘आके कट इट’ भने । तर नायिका अरुणीमा निर्देशक नरेशको कानैमा आएर भनिन्,’सर, ऊ (जन्ती बनेको जुनीयर कलाकारलाई इंगीत गर्दै) त्यसले उता हेरेको थियो । अरुहरुको पनि र्याक्सनै पुगने ।’ निर्देशक पौडेलले अरुणीमाको कुरा सुनेपछि फेरि सबैलाई यसो गर्नू, उसो गनू भन्दै सिकाएर त्यो सट फेरि खिच्न लगाए । बाँकी»
चर्तिकला18 प्रतिक्रियाहरु » फेसबुकमा नेपाली कलाकार लक्ष्मण November 8th, 2008
युवा जमातबीच लोकपि्रय ‘फेसबुकडटम’मा नेपाली चलचित्र, संगीत फाँटका केही कलाकारले पनि आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन् । फेसबुकमार्फत आफ्ना सन्देश साथीहरूमाझ पुर्‍याउने कलाकारमा नायक राजेश हमाल, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य (महजोडी), भुवन केसी, भूपेन चन्द, नायिका झरना बज्राचार्य आदि छन् । राजेश पायल राई, क्रान्ति आले, मोहित आचार्य, निमा रुम्बालगायतका गायक पनि यो साइटमा भेटिन्छन् । तर, अचम्म के छ भने फेसबुकमा उनीहरूका साथीहरू, सन्देशहरू भए पनि कतिपय कलाकारलाई फेसबुक भनेको के हो ? आफ्नोबारेमा कसले म्यासेज अपडेट गरिरहेको छ भन्ने थाहै छैन । बाँकी»
गतिविधि22 प्रतिक्रियाहरु » पैसा तिरिदिउँ यार !! लक्ष्मण October 31st, 2008
चर्तिकला30 प्रतिक्रियाहरु » सिक्वेल चलचित्रमा चाहिँ नपछारियौ है साथी हो… लक्ष्मण October 5th, 2008
अहिले नेपाली चलचित्रकर्मीहरु पनि श्रृंखला चलचित्र बनाउनतिर अग्रसर भएका छन् । हलिउड र बलिउडमा झै यहाँ पनि त्यो क्रम सुरु भइसकेको छ । रेखा थापाको ‘हिम्मत’ सफल भएपछि त्यसैका निर्देशक दीपक श्रेष्ठले आफै निर्माता भएर ‘हिम्मत २’ निर्माण गरिसकेका छन् भने निर्माता राजकुमार राईले ‘पापी मान्छे’ को ब्यावसायीक सफलता पछि ‘पापी मान्छे २’ निर्माण गरिसकेका छन् । त्यस्तै, ‘क्यारेङ ग्याङ’ नामक भिडीयो चलचित्रको प्रदर्शनपछि उदय सुब्बाले अहिले निखिल उप्रेतीलाई प्रमुख भूमिकामा लिएर ‘क्यारेङ ग्याङ २’ निर्माण गरिरहेका छन् । पुरानो सफल चलचित्र ‘कुसुमे रुमाल’ पनि अहिले ‘कुसुमे रुमाल २’ बन्दै छ । यि त भए एउटा चलचित्रको सफलता पछि त्यसैको अर्को भाग स्वरुप बनाइँदै गरिएका चलचित्रह्ररु । ठूलो पर्दाका चलचित्र बाहेक टेलिश्रृंखलाहरु पनि ‘पार्ट २’ भएर आउन थालेका छन् नेपालमा । मेलीना मान्नधर र महेन्द्र बुढाथोकीको ‘करुणा २ ‘ अहिले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसार भइरहेको छ । बाँकी»
चर्तिकला5 प्रतिक्रियाहरु » पूजना ‘स्त्री’ अर्को लिङ्ग परिवर्तन नगर ल… लक्ष्मण October 5th, 2008
पूजा प्रधानबाट पूजना प्रधान हुँदै अहिले पूजना ‘स्त्री’ भएकी छिन् यिनी । उनको शरीरले नै देखाउँछ की उनी ‘स्त्री’ हुन भनेर तर फेरि पूजना ‘स्त्री’ किन त ? कि त आफ्नो ‘स्त्रीत्व’ माथि आफैलाई बिश्वास नलागेर मान्छेहरुको अगाडि आफूलाई ‘स्त्री’ भनेर चिनाउनु परेको ? यो प्रश्न पनि यक्ष बनेर खडा भएको छ हिरोइन पूजाको अगाडि । ‘हिरो’ चलचित्रबाट हिरोइन् बनेकी पूजा अहिले ‘पापी मान्छे २ ‘ मा आइपुग्दा कहिले नाम त कहिले टाइटल,थरले चेञ्ज भइसकेकी छिन् । र, साँच्चै अहिले त बानी बेहोरामा पनि उनको निकै परिवर्तन आएको छ । पहिला जस्ती छैनन् पूजना । उनलाई अचेल दर्शनशास्त्र निक्कै आउँछ । जीवन र जगतका कुरा गर्न उनलाई सायदै कसैले भेटाउला । जो मान्छे भेट्दा पनि ‘जय संगत’ उनको ओठबाट फुत्कीहाल्छ । धर्मकर्म, ध्यान, जपतपमा उनको निकै लगाव छ अहिले । अब पूजना प्रधान नभन्नु रे उनलाई पूजना ‘स्त्री’ भन्नु रे । उनलाई नमस्कार, हाइ हेल्लो नगर्नू, ‘जय संगत’ भन्नू रे । बाँकी»
चर्तिकला32 प्रतिक्रियाहरु » ‘राजा साहेब’ को मानमर्दन लक्ष्मण October 2nd, 2008
नेपाल सरकारले नेपाली चलचित्रलाई पनि बिदेशी चलचित्रसहर चलचित्र बिकाश शुल्क तथा एमजी -न्यूनतम ग्यारेन्टी) लगाएको बिरोधमा नेपाली चलचित्रकर्मीहरु -बिशेषगरी निर्माता तथा हलवालाहरु) ले चलचित्र बिकास बोर्डमा आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा कलाकार,निर्माता तथा निर्देशक नीर शाहले देखाएको उद्दण्डले अहिले नेपाली चलचित्र बृत्त तातेको छ । नीर शाहले चलचित्र संघको ब्यानर तानेर,’यिनीहरु बिदेशी फिल्मका दलाल हुन् । यिनीहरुले नै बिरोध गर्ने ?’ भनेर आक्रोशीत भएका थिए । बिचरा नीर राजाको उक्त क्रियाकलापबाट हलवाला निकै आक्रोशीत बनेर राजालाई झण्डै गोदेका । नीर शाह जस्तो मान्छेलाई हलवालाहरु प्रदिप उदय र राजकुमार पोखरेलले गरेको ब्याबहारले त्यहाँ ‘धर्ना दिन’ भेला भएका चलचित्रकर्मीहरुले ‘आम्मै’ को जिव्रो अनायासै टोकेका थिए । बाँकी»
चर्तिकला4 प्रतिक्रियाहरु » Previous Entries